Ururka SOLJA oo urur saxaafeed Somalia ah uga digay inay faro-geliyaan Suxufiyiinta Somaliland | Somaliland.Org
Ururka SOLJA oo urur saxaafeed Somalia ah uga digay inay faro-geliyaan Suxufiyiinta Somaliland
January 28, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Ururka suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA ayaa uga digay ururka suxufiyiinta dalka arbushan ee Somalia inuu joojiyo faro-gelin iyo isku dayo indho adayg ah oo ay ku hayaan suxufiyiinta Somaliland.
Ururka SOLJA waxay sidaasi ku sheegeen war-saxaafadeed is fasiraya oo uu soo saaray shalay Guddoomiyaha Urur-weynahaasi Mr. Xasan Maxamed Yuusuf, waxaanu u dhignaa sidan:-
“Ururka Suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA wuxuu u taagan yahay sugidda iyo ilaalinta xaqa iyo waajibaadka Suxufiga iyo Saxaafadda, waxaanu u dhisan yahay dhammaan inta ku shaqaysa ama leh xirfadda Suxufinimo.
Ururkani wuxuu ku dhismay sharciyadda caalam ahaan laysla ogolyahay iyo xeerarka Gaar ahaan Somaliland u yaala, oo aanu ka xussayno Qodobka saddexaad, faqraddiisa ‘D’ ee Xeerka Saxaafadda Somaliland Xeer Lambar 27/2004, kaas oo waajibinaya xaqa ay Suxufiyiintu u leeyihiin inay samaystaan dallad ama Urur kulmiya Suxufiga iyo Saxaafadda, isla markaana danahooda u adeega. Iyada oo taas laga duulayo, ayaa Ururkani samaysmay.
Sidaas darteed, waxa aanu dhamaan ururadda u dhaq-dhaqaaqa xoriyadda saxaafadda heer kasta oo ay gaadhsiisanyihiinba ku wargelinaynaa in la dhawro qawaaniinta ururadda caalamiga ah iyo kuwa dalalka. waxaa kalle, oo uu ururka Suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA u caddaynayaa daneeyayaasha Saxaafadda, Bulshada caalamka iyo guud ahaan ururadda kalla duwanba in ;
1- Ururka SOLJA uu yahay Ururka sharciyan u taagan in uu ka hawlgalo, kana hadlo arrimaha khuseeya Suxufiga iyo Saxaafadda Somaliland, loona marayo wixii la xidhiidha arrimahaas.
2- Waxaa kalle oo aanu gaar ahaan ururka NUSOJ ee ka hawlgalla Somalia iyo inta kalle ee la midka ahba, ku wargelinaynaa in ay joojiyaan isku dayada indha adaygu ku jiro ee ay ku faragelinayaan Suxufiyiinta Somaliland, iyagoo aan marrin ururka Solja oo hortii jiray. Iyaddoo la’isku ixtiraamayo waajibaadka iyo masuuliyadaha la kalla leeyahay. 2- Waxaa kalle oo aanu baahinaynaa in kiisaska la xidhiidha Somaliland si furan ururka Solja u soo dhaweynayo cid kasta oo kalla shaqeynaysa, balse aanu wax rasmi ah u aqoonsan doonin warbiximaha aan la hubin ee ururaddu shaacinayaan iyaddoo aan xog laga hayn xaaladda jirta markaas.
Aad baanu ugu mahadnaqaynaa dhamaan ururaddii iyo hay’addihii sidda tooska ah ururka SOLJA ugala shaqeeyay xaaladdihii murugssanaa ee bilihii aynu ka soo gudubnay la soo darsay Saxaafadda Somaliland iyo kuwa diyaarka la ah ee wadda shaqeyntu naga dhaxaysaba.”
Previous PostBaaxadda khasaarihii dagaalkii shalay ka soo gaadhay maleeshiyadii soo weerartay Ciidamada QarankaNext PostGuddoomiyaha Ururka Siyaasadeedka NDB oo ka hadashay qorsheyaasha ururkoodu u hayo bulshada	Blog